Teny notsongaina Paulo Coelho tena ilaina 50 izay hanova ny fiainanao - Quotes
Amin'ny maha-mpanoratra tantara velona lehibe azy indrindra, i Paul Coelho dia manohy manome aingam-panahy olona marobe erak'izao tontolo izao miaraka amin'ny sangan'asa toy ny The Alchemist, Eleven Minutes, ary By the River Piedra I Sat Down and Wept.
Avy amin'ireto boky ireto - ary avy amin'ilay lehilahy mihitsy - dia misy fitambaran-teny mahatalanjona izay manova fiainana tokoa rehefa mipetraka ianao ary misaintsaina ny dikan'izy ireo.
Ireto misy teny nalaina top 50 an'i Paulo Coelho tsy misy filaharana manokana.
Ny iray tiana satria ny iray tiana. Tsy ilaina ny fitiavana.
Io ilay antsointsika hoe fitiavana. Rehefa tiana ianao dia afaka manao na inona na inona amin'ny famoronana. Rehefa tianao ianao dia tsy ilaina mihitsy ny mahatakatra ny zava-mitranga, satria mitranga ao aminao ny zava-drehetra.
ny vehivavy manambady ahy toy ny zaza
Ny zavatra sasany amin'ny fiainana dia tsy maintsy za-draharaha fotsiny - ary tsy hazavaina mihitsy. Ny fitiavana dia zavatra toa izany.
Ny fitiavana dia tsy hita amin'ny olon-kafa, fa amin'ny tenantsika dia mamoha azy tsotra izao. Fa mba hanaovana an'izany, mila ilay olona hafa isika . Tsy misy dikany ihany izao rehetra izao rehefa manana olona hizarana ny zavatra tsapantsika isika.
Rehefa tia isika dia miezaka hatrany ny ho lasa tsara kokoa noho isika. Rehefa miezaka ny ho lasa tsara kokoa noho isika isika dia lasa tsara kokoa koa ny zavatra rehetra manodidina antsika.
Amin'ny fiainana, lahatra ary Adventure
Mpitsangatsangana amin'ny dian'ny cosmic isika, kintana, fihodinana ary fandihizana any amin'ny eddies sy tadio tsy manam-petra. Mandrakizay ny fiainana. Nijanona kely izahay hihaona, hihaona, hitia, hizara. Fotoana sarobidy ity. Izany dia zana-kazo kely amin'ny mandrakizay.
Ny tsiambaratelon'ny fiainana kosa dia ny fianjerana impito ary hiarina in-valo.
Rehefa tsy ampoizintsika izany dia mametraka fanamby ho antsika ny fiainana hizaha toetra ny fahasahianay sy ny fahavononantsika hiova amin'ny fotoana toy izany, tsy misy antony tokony hiheverana fa tsy nisy na inona na inona nitranga na nilaza fa mbola tsy vonona isika. Tsy hiandry ny fanamby. Tsy miherika ny fiainana. Ny herinandro dia fotoana ampy hanapahana hevitra raha hanaiky ny hiafarantsika isika na tsia.
Azoko atao ny misafidy na ho iharan'izao tontolo izao na ho mpitsangatsangana amin'ny fitadiavana harena. Fanontaniana iray momba ny fomba fahitako ny fiainako daholo izany.
Na inona na inona ataony, ny olona rehetra eto an-tany dia mitana andraikitra lehibe amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Ary mazàna tsy hainy izany.
Amin'ny fanarahana ny nofinao
Ny mety hitranga amin'ny nofy izay mahaliana ny fiainana.
Tsy misy afa-tsy zavatra iray izay mahatonga ny nofinofy tsy ho tratrarina: ny tahotra ny tsy fahombiazana .
Lazao amin'ny fonao fa ny tahotra fijaliana dia ratsy kokoa noho ny fijaliana mihitsy. Ary tsy mbola nisy fo nijaly rehefa mandeha mitady ny nofinofiny, satria ny segondra rehetra amin'ny fikarohana dia fihaonana faharoa amin'Andriamanitra sy mandrakizay.
Ny olona dia afaka, amin'ny fotoana rehetra amin'ny fiainany, ny manao izay nofinofisiny .
Isaky ny te hahatratra zavatra ianao dia tazomy ny masonao, mifantoha ary alao antoka fa fantatrao tsara izay tianao. Tsy misy olona mahatratra ny tanjon'izy ireo raha mikimpy ny masony.
Tsy tokony hitsahatra ny manonofy isika. Ny nofy dia manome sakafo mahavelona ny fanahy, toy ny sakafo atao amin'ny vatana.
Ary, rehefa misy zavatra tadiavinao, dia miray tsikombakomba amin'ny fanampiana anao hahatratra an'io izao rehetra izao.
Andro iray dia hifoha ianao ary tsy hisy fotoana intsony hanaovana ireo zavatra tadiavinao hatrizay. Ataovy izao.
Tsy miaina amin'ny lasa sy ny ho avy aho. Ny amin'izao fotoana izao ihany no mahaliana ahy. Raha afaka mifantoka amin'ny ankehitriny ianao dia ho lehilahy sambatra. Ho fety ho anao ny fiainana, fetibe lehibe, satria ny fiainana no fotoana iainantsika ankehitriny.
Tsy misy amintsika mahalala izay mety hitranga na dia minitra manaraka aza, nefa mbola mandroso ihany isika. Satria matoky isika. Satria manam-pinoana isika.
Ny tsiambaratelo dia eto amin'izao fotoana izao. Raha mijery tsara ny ankehitriny ianao dia afaka manatsara azy. Ary, raha mihatsara ianao amin'izao fotoana izao, izay ho avy any aoriana dia ho tsara kokoa ihany koa.
Misy fotoana miditra ny fiainantsika ireo olana ary tsy afaka manao na inona na inona isika hisorohana izany. Fa misy antony eo izy ireo. Rehefa mandresy azy ireo isika vao hahatakatra ny antony nahatongavan'izy ireo teo.
Ny sisa ataonao dia ny mandinika lesona manadino tonga foana rehefa vonona ianao, ary raha afaka mamaky ny famantarana ianao , dia hianaranao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao raha te handray ny dingana manaraka.
Mamelà heloka fa aza adino, sao dia haratra indray ianao. Ny famelana heloka dia manova ny fomba fijery. Manadino ny lesona ny fanadinoana.
Iray ihany ny fomba ianarana. Amin'ny alàlan'ny hetsika. Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao dia nianaranao tamin'ny dia nataonao.
Fanangonana vitsivitsy hafa amin'ny teny nalaina (mitohy etsy ambany ny lahatsoratra):
Rivotra 13 manamarina ny fiainana ao amin'ny quote Willows
Fanononana Anne Frank tena mampihetsi-po 38 izay hampieritreritra anao
Fanononana Roald Dahl tsy azo resahina 36 hamenoana anao amin'ny fahagagana
Izay very zavatra noheveriny fa azy ireo mandrakizay dia tonga saina amin'izay fa tsy misy zavatra tena azy.
Tsy misy very olona, ​​satria tsy misy manana olona. Izay no tena traikefa amin'ny fahalalahana: manana ny zava-dehibe indrindra eto an-tany nefa tsy manana izany.
Rehefa misy miala dia satria olon-kafa efa ho avy.
firy taona i jeff bezos ankizy
Tsy resy ianao rehefa resy. Resy ianao rehefa miala.
Rehefa sendra fatiantoka ianao dia tsy misy ilana azy ny manandrana mamerina izay efa natao dia ny manararaotra ny habaka malalaka misokatra eo alohantsika ka mameno azy vaovao.
Raha sahy manao veloma ianao dia hamaly soa anao amin'ny fiainana ny fiainana.
Zava-dehibe hatrany ny fahafantarana rehefa tonga amin'ny fiafarany ny zavatra iray. Manidy faribolana, manidy varavarana, mamita toko, tsy maninona izay antsointsika hoe inona no zava-dehibe dia ny mamela ireo fotoana taloha teo amin'ny fiainana izay tapitra.
Manidy varavarana sasany anio. Tsy noho ny avonavona, ny tsy fahafaha-manao na ny fiavonavonana, fa noho izy ireo tsy mitondra anao na aiza na aiza.
Amin'ny fitsarana ny hafa
Toa samy manana ny eritreriny mazava ny amin'ny fomba tokony hitondran'ny olon-kafa ny fiainany ny tsirairay, fa tsy ny an'ny azy manokana.
Afaka ataontsika aza mitsara ny ain'ny hafa mihitsy , satria ny olona tsirairay dia tsy mahalala afa-tsy ny fanaintainany sy ny fialany. Zavatra iray ny mahatsapa fa mandeha amin'ny lala-mahitsy ianao, fa hafa ny mieritreritra fa ny anao irery no lalana.
Amin'ny fihainoana ny fonao
Tadidio fa na aiza na aiza fonao dia any no hahitanao ny harenao.
Tsy ho afa-mandositra ny fonao mihitsy ianao. Ka tsara kokoa ny mihaino izay lazainy.
Amin'ny fiatrehana tahotra
Rehefa mahita ny lalanao ianao dia aza matahotra. Mila manana herim-po ampy hanaovana fahadisoana ianao. Fahakiviana, faharesena ary famoizam-po no fitaovana ampiasain'Andriamanitra hanoro antsika ny lalana.
Ny tsy fahasahian-tena dia tsy ny tsy fisian'ny TAHOTRA fa kosa ny tanjaka mba handrosoana hatrany na eo aza ny tahotra.
Ny maha olombelona dia midika fisalasalana ary mbola manohy ny lalanao.
Ny talenta dia fanomezana manerantany, saingy mila herim-po be ny fampiasana azy. Aza matahotra ny ho tsara indrindra.
Momba ny fifehezana ny fiainanao manokana
Ianao dia mino ny maha-izy anao.
Manana safidy roa ianao, hifehezana ny sainao na hamela ny sainao hifehy anao.
Raha mandresy ny tenanao ianao dia handresy izao tontolo izao.
Ary ny sisa
Ny zavatra madinidinika koa dia zavatra miavaka indrindra, ary ny hendry ihany no mahita azy.
Aza mandany ny fotoanao amin'ny fanazavana: ny olona fotsiny no maheno ny zavatra henoiny.
Ny ranomaso dia teny mila soratana.
Mampiseho ny herin'ny fanahinao ny masonao.
lazao ny famantarana ny ankizivavy tia anao
Aza manazava. Tsy mila izany ny namanao ary tsy hino anao ny fahavalonao.
Ny fitahiana rehetra tsy raharahina dia lasa ozona.
Iza amin'ireo teny nindramina mahafinaritra ireo no tianao? Mametraha hevitra etsy ambany ary ampahafantaro anay.
ny fomba fialana sasatra amin'ny fiainana
mampiaraka amina olona mbola tsy niaraka tamin'io
inona no hatao rehefa raiki-pitia
ahoana no ahalalanao raha tianao ny bandy
teny telo izay mamaritra anao indrindra